သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ | ဒေါင်းဇာနည်
ဆရာကြီးနှင့် စပ်မိစပ်ရာပြောရင်း “တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှစ်ဦး အဖွဲ့ကြီးကိုလဲ ဖျက်လိုက်ကြပြီကွဲ့။ တို့ နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရသေးတာ မဟုတ်ဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးသမျှလဲ ဘာမှ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်လို့ရမယ် မထင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တော့ ရှိနေဘို့ ကောင်းတာပေါ့” ဟု ဆရာကြီးက ဆက်လက်မိန့်ကြားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ၊ ကျွန်တော်လဲ ထောင်က ပြန်လွတ်လာတာ ငါးရက် ရှိပါသေးတယ်၊ အိမ်လဲ အဖျက်ခံထားရလို့ မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာ ခဏ တက်နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ပြန်ဖွဲ့နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါမယ်။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာလဲ အမိန့်ရှိပါဦးလို့ ကျွန်တော်က ပြောသောအခါ၊ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာတော့ စဉ်းစားကြပေါ့ကွယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရဘို့အတွက် နည်းစပ်မယ်ထင်တဲ့ လမ်းစတခုကတော့ အရင် ‘မောင်နု’ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်သုံးချက်ကို တကယ် ဖြစ်မြောက်အောင် ဆက်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ဆရာထင်တယ်။ အဲဒီ အချက်သုံးချက်ကို အရင်က ဆရာတို့ ရှစ်ဦးကော်မတီ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကရော၊ မောင်တို့ ပမညတ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု) ကရော သဘောတူခဲ့ကြပြီး မဟုတ်လားဟု ဆရာကြီးက မိန့်ကြားပါသည်။
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း မိန့်ကြားသည့် “မောင်နု ပြောခဲ့ဘူးသော အချက်သုံးချက်” ဆိုသည်မှာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ ကမ္ဘာအေးကုန်းတော် တန်ဆောင်းတွင် ကျင်းပသည့် ဖဆပလ ညီလာခံ၌ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုက ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တောတွင်းလက်နက်ကိုင်များအား ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့သော အချက်သုံးချက် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအချက်တို့မှာ-
ဒီလိုဆိုရင် အဲဒီ အချက်များအပေါ် အခြေထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းကြဘို့ ပြည်သူတရပ်လုံးကိုရော အစိုးရနှင့် တောတွင်းလက်နက်ကိုင် အင်အားစုများကိုရော ဆရာ့အနေနှင့် နှိုးဆော်ချက် ပထမထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ဘို့ ဆက်လုပ်ကြ ရမှာဘဲဟု ကျွန်တော်က အကြံပေးသည့်အခါ ဆရာကြီးက “အေး၊ တိုင်ပင်သင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုင်ပင်ပြီး အချိန်ရှိတုန်း လုပ်ကြကွယ်” ဟု ပြန်လည် မိန့်ကြားပါသည်။
မဟောသဓဇာတ်မှာလဲ ဘုရားအလောင်း မဟောသဓဟာ ကေးဝဋ်ပုဏ္ဏားကြီးနှင့် စကားစစ်ထိုးပြုလုပ်ကြရာမှာ ပုဏ္ဏားကြီးကို သူ့လက်ထဲက ပတ္တမြားလုံးပြပြီး လက်ဆောင်ပေး ပါရစေလို့ ပြောတယ်။ ပုဏ္ဏားကြီးက လက်ဝါးဖြန့်ပြီး လှမ်းယူတဲ့အခါ အပေါ်က မြှောက်ချလိုက် တော့ ပတ္တမြားက အောက်ကျသွားတယ်။ အဲဒီအခါ ပုဏ္ဏားကြီးက ပတ္တမြားလုံးကို ကုန်းကောက်ရှာတယ်။ ဒီတော့ ပုဏ္ဏားကြီး လည်ဂုတ်ကိုင် မြေကြီးနှင့် နဖူးထိအောင် နှိပ်ချပြီး၊ ပုဏ္ဏားကြီး ကျုပ်က သားမြေးအရွယ်ပါ၊ ရှိမခိုးပါနှင့်လို့ သူ့ပါးစပ်က သူ့တိုင်းသူပြည်သားများ အကျိုးအတွက် လိမ်လည် အော်ဟစ်ပြောလိုက်တယ်။ သူအော်ဟစ်ပြောသံ ကြားတဲ့အခါ ကြိုတင်စည်းဝါးရိုက်ထားတဲ့ သူ့လူ ဖွားဘက်တော်များက “ပုဏ္ဏားကြီးက တို့အရှင်ကို ရှိခိုးနေပြီ ဟေ့” လို့ ၀ိုင်းအော်ကြတယ်။ မဟောသဓရဲ့ လူများအော်သံကြားတော့ ကေးဝဋ်ပုဏ္ဏားကြီးကို ခြံရံလိုက်လာကြတဲ့ စူဠနီဗြဟ္မာဒတ်မင်းရဲ့ ဗိုလ်ပါရဲမက် သိန်းသန်းချီပြီး ပါဝင်တဲ့ စစ်တပ်ကြီးဟာ ထိတ်လန့်ပြန်ပြေးကြရှာတယ်ဆို မဟုတ်လား။
အင်းဝရောက်တော့ ရှင်ဘုရင်ကြီးက “ဘဲ့နဲ့လဲ တူတော်မောင် ကြာလှချည့်ကလား” လို့ မေးတဲ့အခါ “မှန်လှပါ တူတော်မောင် နိုင်ငံတော်အောက်ပိုင်းက ပုန်ကန်ခြားနားသူတို့ရဲ့ အခြေအနေကို စုံစမ်းရန်အသွား၊ မင်းဘူးရောက်တော့ ရွှေစက်တော်ဘုရား ၀င်ဖူးမျှော်လိုတဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြလာလို့ ခေတ္တ ၀င်ဖူးပါတယ်။ ဘုရားရောက်တော့ စေတနာ ပိုမိုလာပြန်တဲ့အတွက် ၀ါတွင်းသုံးလ ဥပုသ်ရက်ရှည်စောင့်ပါတယ်။ ဥပုသ်ထွက်ပြီး မင်းဘူး ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါ ဒဂုံ၊ သံလျင်က ပုန်ကန်ခြားနားသူတို့ရဲ့ အင်အားဟာ ပိုမိုကြီးမားနေကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်” လို့ ဖြေကြားတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် တူတော်မောင် “မင်းဘူးက အောက်ဖက်ကို မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့” လို့ ဘုရင်ကြီးက ထပ်မေးတော့ “မှန်လှပါ တူတော်မောင် မင်းဘူးအောက် မရောက်ခဲ့ပါဘူး” လို့ မင်းသားက ထပ်မံဖြေကြားတယ်။
အဲဒီတော့မှ ဘုရင်ကြီးက “တို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဘိုးတော် ဘေးတော်တို့ လက်ထက် က တစုတပေါင်းထဲ ရှိခဲ့တယ်၊ နိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးများ အားလုံးဟာ လဲ ဧကရာဇ်မင်းတပါးထဲရဲ့ ထီးရိပ်အောက်မှာ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ခိုလှုံနေကြတယ်။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာရေးတွေဟာလဲ စည်ပင်ခန့်ညားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပါတ်ဝန်းကျင် တိုင်းကြီးပြည်ကြီးများရှိ အမင်းမင်းတို့က လေးစားကြတယ်။ မကျူးကျော် မစော်ကားရဲကြဘူး၊ အကြည်တော် မဟာမိတ်များအဖြစ် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာလဲလှယ် ပို့ဆက်ခြင်း ပြုခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ကာလအနည်းငယ်ကစပြီး တိုင်းတပါးသား ကုလားဖြူ၊ ကုလားမဲများ ၀င်ရောက်လာကြပြီး သူတို့အကျိုးအတွက် တို့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တို့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကို အချင်းချင်း မညီညွတ်အောင် ကွဲပြားကုန်အောင် အမျိုးမျိုး ခြေထိုး သွေးခွဲကြတယ်၊ လက်နက်ပစ္စည်းများ ပေးပြီး အားပေးအားမြှောက် လုပ်ကြတယ်။
အခုလို တိုင်းနိုင်ငံတော်အရေး၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာတော်အရေးများက ဆောင်ရွက်စရာတွေ အလွန် အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျုပ်တူတော်မောင်အနေနဲ့ ဘုရားတရား အာရုံပြုကာ ဥပုသ်သီလ စောင့်သုံးနေဘို့ကို ဆန္ဒပြင်းပြနေတော့ တိုင်းနိုင်ငံအရေးတွေ ဆောင်ရွက်ရမယ့် မြို့ပြထီးနန်းနဲ့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဥပုသ်သီလ စောင့်သုံးနေနိုင်မယ့် ကျောင်းကန်ဘုရားအနီးမှာ သွားနေဘို့သာ သင့်တော်တယ်။ ကိုင်း…. ဒါကြောင့် ကျွန်ပ်တူတော် မင်းသားနှင့် သူ့လူ နောက်ပါများပါ ဘုရားကို ခေါင်းလောင်းထိုးလှူလိုက်ကြ” လို့ မိန့်ကြားပြီး အတွင်းဆောင် ၀င်သွားသတဲ့။ အဲဒီအခါ မှူးကြီးမတ်ကြီးများက မင်းတရားကြီး အမိန့်အတိုင်း မင်းသားနှင့် သူ့လူများကိုပါ နန်းတော်တွင်းက ခေါင်းလောင်းထိုးပြီး ဘုရားကို လှူကြရတော့တယ်။
“မောင်တို့ တခုစဉ်းစားကြည့်၊ စစ်တခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အိုးအိမ်မြို့ရွာတွေသာ ပျက်စီးတာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေလဲ အသက်ခန္ဓာဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ပျက်စီးခြင်းတို့လဲ ဖြစ်ကြစမြဲပဲ။ ဒါကြောင့် အခုလို စစ်ကြီးတခုပြီးကာစလဲဖြစ်၊ နှစ်တရာကျော် တိုင်းတပါးသား လက်အောက် ကျွန်သပေါက်ဘ၀ ကျရောက်ရာက လွတ်လပ်စ, လဲဖြစ်တဲ့ တို့နိုင်ငံမှာ အိုးအိမ်မြို့ရွာ အပျက်တွေကို ပြန်ပြင်ဘို့ အသစ်တည်ဆောက်ဘို့သာမက လူတွေရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ငဲ့မှုတွေ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားမှုတွေကိုလဲ ပြုပြင်ဘို့လိုတယ်။ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်လည်း အများအပြား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စရာ လိုနေသေးတယ်။ အဲဒီလို အစိုးရရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ များပြားနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ပုတီးစိတ် ဥပုသ်စောင့် နေချင်လှတဲ့ ၀န်ကြီးတွေကိုတော့ အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားကြီး လုပ်သလို ဘုရားကို ခေါင်းလောင်းထိုးလှူလိုက်ကြဘို့သာ ကောင်းပါတော့တယ်” ဟု မိန့်ကြားကာ ရယ်မောနေပါ တော့သည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ ရယ်မောကြရပါသည်။
မေလထုတ် မြန်မာ့ဓန မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဆူးငှက်က မန္တလေးက ရွာဟိုင်းသင်္ချိုင်း နေရာဟောင်းမှာ ရဲဘော်ဗဟိန်းရဲ့ အုတ်ဂူလေးရှိသေးတယ်လို့ ဖတ်ရတော့ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၆၀) တုန်းက အမေ ကိုဗဟိန်းအပေါ် မရိုးမသား ရှိခဲ့တာကလေး ပြန်ပေါ်လာရတယ်။
ပြန်ပေါ်လာရုံ၊ အမှတ်ရရုံမက စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ကို ကိုယ်က ဘာမှ ပြောလို့ရတဲ့ ဘ၀မျိုးမှ မဟုတ်တော့ဘဲကိုး။
ကိုဗဟိန်းနဲ့ အမေတို့က မန္တလေးမှာ နေကြတာက ဂုန္တန်ဝင်းနဲ့ ယွန်းတန်းဆိုတော့ မန္တလေးလို တပြပဲ အိမ်ချင်းက ဝေးကြတာမို့ အိမ်နီးချင်းတွေပေါ့။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်စလုံးက ဆရာကြီးဦးရာဇတ်တပည့် နေရှင်နယ်ကျောင်းသားတွေ။ အတန်းချင်းတော့ မတူပါဘူး။ သူက ငယ်တာကိုး။ နောက်ဦးလှနဲ့ အမေနဲ့ အကြောင်းပါလာတော့ ဦးလှနဲ့ ကိုဗဟိန်းက အရင်ကတည်းက သိကျွမ်းပြီးသားတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဦးလှ မန္တလေးသားဖြစ်လာတော့ ကိုဗဟိန်းအဖေ ဦးလေးမှင်က ဦးလှကို ပိုပြီး ခင်တယ်၊ ချစ်တယ်လေ။ ဦးလှက မန္တလေးမှာ သူ့အမျိုးရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒါ ဦးလေးမှင်ပဲလို့ အောက်မေ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့သား သားဦး ကိုစိုးဝင်း မွေးတော့ လသားကလေး ရှိသေးတယ်။ မချီတတ် ချီတတ်နဲ့ အနှီးထုပ်ချိုင်းညှပ်ပြီး ထီးကြီးတချောင်းဆောင်းလို့ သူ့ ဦးလေးမှင်ကို သူ့သား သွားပြသတဲ့။
အမေ ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်ရေးနေတာက အမေနဲ့ ကိုဗဟိန်းနဲ့ ရင်းနှီးပုံကို သိစေချင်လို့ပါ။ အမေက ၁၉၃၅ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ၀တ္ထုတိုကလေးတွေ ကြီးပွါးရေးထဲမှာ ရေးနေတယ်။ အဲဒီလိုရေးရင်း တနေ့တော့ ကြီးပွါးရေးထဲမှာ မြမဉ္ဇူ ကလောင်အမည်နဲ့ အမေရေးတဲ့ “ဒေါသ” ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတိုကလေး ပါလာတယ်။ ဒီဝတ္ထုတိုကလေးကို ကိုဗဟိန်းက ကြိုက်လွန်းလို့တဲ့၊ အိမ်ကိုလာပြီး သူက သူ ဒီဝတ္ထုတိုကို ကြိုက်တဲ့အကြောင်း ချီးကျူးဝမ်းသာစကား လာပြောတယ်။ Continue reading →
မေ-ဇွန် အလုပ်သမား အရေးအခင်း “ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းတိုက်ပွဲ“
သင်္ဘောကျင်းမှာ ကျွန်တော်က ကောင်စီဝင်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားထုက ရွေးချယ်ပြီး တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ပါ။ ကောင်စီကနေပြီး ကျွန်တော့်ကို ထုတ်လုပ်ရေး အတွင်းရေးမှူး၊ စည်းကမ်း ထိမ်းသိမ်းရေး အတွင်းရေးမှူး၊ စံပြရွေးချယ်ရေး အတွင်းရေးမှူး ဆိုပြီး တာဝန် ၃ ခု ပေးပါတယ်။
(အခု VOA မှာ လုပ်နေတဲ့) ဦးချစ်ဦး(၃၇) နှစ် ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ကောင်စီ ဥက္ကဌပါ။ သူက စာရင်းကိုင်ချုပ်။ ကျွန်တော်တို့ သင်္ဘောကျင်းမှာ လခ ကျပ် ၁၂ဝဝ နဲ့ ဘားဆုံးနေပြီ။
ကောင်စီအစည်းအဝေးကို အပတ်တိုင်း ထိုင်ရတယ်။ တက်ရောက်တဲ့သူတွေထဲမှာ ဦးချစ်ဦး၊ ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်၊ ကောင်စီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ နောက် ဌာနဆိုင်ရာ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေ…….
ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းက ယူဂိုစလဗ်က အကူအညီပေးတာ၊ သိန်း ၆၅ဝ ကုန်ကျတယ်။ ယူဂိုစလဗ် အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ အတူ အလုပ် လုပ်ကြရတယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အနောက်ဂျာမဏီ လျှပ်စစ် ဆီးမင်း ကုမ္ပဏီရှိတယ်။ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စက်တွေက အရှေ့ဂျာမဏီ စက်တွေ။ စက်ရုံထဲမှာ သင်္ဘောလွန်းလမ်းတွေ၊ သင်္ဘောကို တနေရာက တနေရာကူးပြောင်းပေးတဲ့ Transmitter ရေကန်ကြီးတွေ၊ သင်္ဘော တည်ဆောက် ရေးစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေပေါင်းစုံ၊ ဌာနပေါင်းစုံ ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေ ဆိုတာကလဲ များသောအားဖြင့် ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်း သမားတွေ…… အလုပ်သမားပေါင်း ၁ဝဝဝ ခန့်ရှိတယ်။
၁၉၆၇ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ အင်းစိန်မှထွက်လာသော ဒတ်ဆန်းကားသည် ကြည့်မြင်တိုင်၊ လမ်းမတော် စသည့်ရပ်ကွက်များ၌ လူအချို့ကို ချခဲ့ပြီးနောက် ဘုရားလမ်းသို့ ကွေ့လိုက်လေသည်။
သစ်ပင်၊ တိုက်တာ၊ အိမ်ယာ၊ ဈေးဆိုင်၊ လူများ၊ ကားများသည် ပန်းရောင် မြူမင်းလွင်အောက်၌ ယိမ်းထိုးနေကြသည်။ ပြာသိုလမို့ မြူရိပ်မစင်၊ နှင်းငွေ့ကျန်၊ ကတ္တရာစေး လမ်းမကြီးမှာ ဖဲကြိုးအနက်ခင်းထား၍ ကားကွေ့လိုက်သောအခါ တွန့်သွား၏။ ကောင်းကင်ပြာ ထဲမှ ရွှေဝါရောင် ကြယ်ပွင့်ကြီးမှာ ကြီးလှပါကလား။ ဆေးရုံကြီးဝင်းထဲ၌ ဆေးသုတ်ထားသော ကစားစရာ သေတ္တာခွံကြီး ဘယ်တုန်းက ရောက်နေပါလိမ့်။ သံပတ်ပေးထားသော မိန်းမရုပ်များ သည် တတောက်တောက် ခုတ်မောင်းနေကြ၏။ ကစားစရာ စက်ရုံမှ ပုံစံထုတ်ဆရာမှာ ကုလားသွေးပါသည်ထင့်၊ မှားယွင်း၍ ၀ါသော၊ ဖြူသော၊ မဲသော၊ ကွက်သော ဗိုက်သားတို့ကို ဖော်ပေးထားကြ၏။ ဖဲပြားအနက်ကြီးသည် တွန့်ကာ ချိုင့်သွား၏။ သစ်ကိုင်းများသည် ကျွန်တော့်ကို လာ၍ ထိခတ်သည်။ ခြင်္သေ့ကြီး ၂ ကောင်သည် လည်ဆံမွေးထလျက် ကျွန်တော့်ထံ ပြေးလာလေပြီ။ အလို….။
ကားမောင်းပို့သူ စစ်ဗိုလ်သည် ပြုံးမြမြလုပ်နေ၏။ ကားအရှိန်သည် အနည်းငယ် လျော့လာသည်။
မဟာရွှေစေတီကြီးမှ ရွှေရောင်သည် မြင်ကွင်းကို လာ၍ ရိုက်လိုက်သည်။ စိမ်းသော သစ်ကိုင်းများသည် ငုံ့မိုးညွတ်ကိုင်းနေရမှ အပေါ်သို့ ပြန်တက်သွားကြလေပြီ။ Continue reading →
Tags: ဒဂုန်တာရာ, သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း
အီတလီတို့-အင်္ဂလိပ်တို့ လိုက်ပီး ဓမြတိုက်နေကြတယ် ဆိုတာတွေဟာ၊ ရှေးတုံးက ဗမာ တွေ လုပ်ခဲ့သလိုဘဲ။ Continue reading →